MacBook Pro oo wata laydhadh yar-yar, Magic mouse Pro, iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadkan dhammaanteen waan wada sugeynaa WWDC sannadkan oo ay in ka yar 48 saacadood inaga xigto si ay uga bilaabato nuxurka furitaanka. Laakiin iyada oo maalinta ay filayaan malaayiinta isticmaaleyaasha Apple ay timaaddo si ay u arkaan faa'iidooyinka nidaamyada cusub ee hawlgalka waa inaan ku noolaannaa nolol caadi ah xaaladdanna waa inaan ku soo koobno ​​hal toddobaad oo dheeri ah qaar ka mid ah wararka ugu wanaagsan toddobaadkan aniga oo ah ka yimid Mac.
Waxaan ku bilaabaynaa warka tilmaamaya MacBook Pro oo leh muuqaal yar oo LED ah. Alaab-qeybiyeha Apple Technologies Global Lighting Technologies wuxuu ka bilaabi doonaa shixnad ka kooban mini-LED bandhigay jiilka soo socda ee lagu daydo MacBook Pro rubuca saddexaad ee 2021.
Mid kale oo ka mid ah wararka la iftiimiyay toddobaadkan ayaa ah a Fikradda Apple ee jiirka loo yaqaan Magic Pro. Fikradani maahan mid dhab ah laakiin waxay xal u tahay dhammaan cilladaha aan ka helno Apple Magic Mouse, Waan arki doonnaa haddii Apple ay ku qaadato wax faahfaahin ah oo ku saabsan tan Mouse mustaqbalkeeda.
La cusub beta 2 oo ah macOS Big Sur 11.5 loogu talagalay horumariyeyaasha ayaa hadda la heli karaa. Xaaladdan iyo sidii noocyadii beta ee hore, shirkaddu waxay soo bandhigaysaa noocyadan la hagaajiyay ee loogu talagalay kuwa horumariya kaas wuxuu diiradda saarayaa sixitaanka iyo cilad bixinta ciladaha.
Si loo dhammeeyo waxaan idinla wadaageynaa warka Moodooyinka cusub ee 'MacBook Pro' ayaa daadanaya. Macluumaad nidaamiya oo ku yaal Shiinaha ayaa si aan ku talagal ahayn u mas'uul ka ah soo bandhigida si aan rasmi ahayn qalabkan cusub ee Apple. Waa inaan sugnaa haddii ay run tahay iyo gaar ahaan daqiiqadda ay si rasmi ah u bilaabeen qaar badan ayaa ka hadlaya WWDC ee soo socota, dhawaan ayaan arki doonaa ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » MacBook Pro oo wata laydhadh yar-yar, Magic mouse Pro, iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac